အမေနဲ့အတူ (ကဗျာရှင် နေပြည်တော်သား) ~ ဒီမိုဝေယံ
ပြည်သူတွေကြားက၊ ပြည်သူနဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်တဲ့ အမေ
သားသမီးတွေ ကိုချစ်လို့၊ အမေ ခေါ်သတဲ့
သားသမီးတွေ ကလည်း ချစ်ပါရဲ့ အမေ …….
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သွေးမို့ပဲ ပြောပြော
လောကဓံ ကိုအန်တု ၊ ကျွန်တော်တို့ စံပြုရတဲ့အမေ
ကျွန်တော်တို့ ချစ်လိုက်ရတာ အမေရယ်……….
ပြည်သူတွေရှေ့က အမေ ရှိသလို
အမေ့နောက်မှာလည်း ပြည်သူတွေ အားလုံး ရှိနေတာပါပဲ
လွတ်လပ်ခြင်း ပန်းတွေ ပွင့်တဲ့အခါများ
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက်ရည်စူး
အမေနဲ့သားတို့ ပန်းတစ်ပွင့်အတူ ခူးပါရစေ အမေ...
ပါလေးတီတိ ပီတာ= အလုံးစုံ စောင့်ရှောက်သောကြောင့် အဖေ
မာဏေးတီတိ မာတာ= သားသမီးတို့အပေါ် ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့် အမေ
တပေါင်းလပြည့် မန္တလေး အဖေနေ့ ဟောပြောပွဲ